काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशमा दिपक मनाङे तेस्रोपटक मन्त्री नियुक्त भएका छन् । हिजो विनाविभागीय मन्त्रीको सपथ खानुअघि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यसँग जोडेर छु’द्र टिप्पणी गरेका छन ।
नयाँ सरकार गठनमा अलमल गरेको भन्दै कांग्रेस नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख निवासअघि विपक्षीहरु धर्ना बसेका थिए । दुई दिनअघि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका मनाङे पनि ध’र्नामा सहभागी थिए। त्यहाँ पत्रकारले उनलाई केही बोलिदिन आग्रह गरे ।
जवाफमा मनाङेले भने, ‘केपी ओलीको न वर्तमान छ, न भविष्य छ । तर, यसको पछि लाग्ने मान्छेहरुको बुद्धि छैन रैछ क्या । दुईवटा कि’ड्नी नभएको मान्छे हो । अरुको त कि’ड्नी छ नि यार । बुद्धि भए छिटो उसको साथ छो’ड्दा राम्रो हुन्छ । म त टाइममै छोडेर बचेँ ।’
यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा मनाङे युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए । सरकार ढ’ल्ने अवस्था आएपछि उनी विपक्षी ग’ठवन्धनमा सामेल भएका हुन् ।
यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदा चौतर्फी वि’रोध भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा आँ’धितु’फान नै आएको थियो । यता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवा’दी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि मान्छे ज’न्मजा’त अ’परा’धी नहुने बताएका छन् ।
दीपक मनाङेको विषयमा टिप्पणी गर्दै भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । गण्डकी प्रदेशसभामा सत्ता पक्षमा रहेका तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री मनाङे अर्थात राजिव गुरुङको विषयमा टिप्पणी गर्दै भट्टराईले भने, ‘मेरो सुविचारित र अनुभवजन्य मान्यता छ– कुनै पनि मान्छे ज’न्मजा’त अ’परा’धी हुन्न ।’
डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाका समयमा आफूले मनाङेलाई भेटेपछि मिडियामा विभिन्न प्रतिक्रिया आएको भन्दै यसलाई आफूले अ’न्यथा नलिएको बताए । भट्टराई लेख्छन्, ‘समाज÷राज्यले मान्छेलाई अ’परा’धी बनाउँछ ।
साथै वर्गीय/ जा’तीय/ लैं’गिक वि’भेद भएको समाजमा राज्य/समाजको वर्चस्वशाली तप्काले उ’त्पीडित/ ब’हिष्कृत तप्कालाई सहजै ‘अ’परा’धी’ बनाइदिन सक्छ । अतः अ’पराध/ अ’पराधी एक सापेक्ष अ’वधारणा हो ।’भट्टराईले आफू जे’ल तथा ब’न्दीगृ’ह सुधारको पक्षमा रहेको भन्दै
नेपालमा धेरै जे’लमा बस्नुपर्ने मान्छे सत्ताको कुर्सीमा वा घरमा बसेका तथा खुला रूपमा रहनुपर्ने मान्छे जे’लमा रहेका बताए । भट्टराईले लेखेका छन्, ‘त्यही सोचका साथ आफू प्रम छँदा मैले जेल सुधार निम्ति तत्कालीन सांसद देवी खड्काको
संयोजकत्वमा एउटा उच्चस्तरीय आ’योग बनाएको थिएँ,
जसको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’रत्नाकर बाल्मिकी बनेको हामी सबैले सुनेको भन्दै भट्टराईले मनाङे अब नायक बन्ने बताए ।उनी लेख्छन्, ‘राजीव गुरुङहरूले नयाँ जीवन र नयाँ भूमिका चा’हन्छन् भने किन ब’न्चित गर्ने ? किन पू’र्वाग्रह राख्ने ?’
२०७८ जेष्ठ ३०, आईतवार १६:०८ गते0Minutes 771 Views